Isigodlo sezwe eladuka - Indawo yokuhlala - Elihle Eliphezulu
Indawo yokuhlala e-Palace of the Lost City, eSun City
Ithempeli laseLost City linamakamelo angama-335 anokunethezeka nama-suites anikezela izihambi ezibukhosini ngemibono emihle phezu kwamanzi noma ehlathini ukuze izivakashi zikhethe.
Igumbi lomuzi olahlekile eSun City linamakamelo angama-335 anokunethezeka nama-suites anika izihambi ezibukhosini ngemibono emihle emanzini noma emahlathini ukuze izivakashi zikhethe. Lezi zakhiwo zenziwe ngezandla kakhulu futhi zikhombisa izitshalo nezilwane zase-Afrika futhi ziqaphele imininingwane egcizelela ukuthintwa komuntu siqu.
Amakamelo okunethezeka ehhotela lakho lase-Sun City anamahhala angu-151 okunethezeka, amakamelo angu-76 aphezulu, amahhala angu-35 aphezulu okunethezeka, amakamelo omndeni angu-55, amakamelo ama-3 angama-paraplegic, ama-suites ayisithupha aphezulu kanye nama-suites amathathu omongameli.
Amakamelo Okunethezeka Aphezulu e-Palace of the Lost City eSun City Resort alala nabantu ababili, ebhedini lobukhulu bendlovukazi, futhi anesimo sokugezela esine-en-suite esinesibhaqe esithile neseshayela, imabula iveza izinto ezingenangqondo kanye nezinto zokunethezeka. Lezi zindawo zinezibuko ezihlukene zokungena, itiye nekhofi, idesksi, isimo se-air kanye nenkonzo yamakamelo amahora angu-24. Buka iziteshi zethelevishini ku-TV yesikrini esivela endaweni yendawo yokuphumula, futhi ujabulele imibono yamasimu kanye nedamu lokubhukuda.
I-Superior Pool Facing Room
I-Superior Pool Facing Room inezindawo ezifanayo njengeGumbi Elihle Lokunethezeka ngaphandle kokuthi linombukiso wokubheka amahhotela okubhukuda ehhotela kanye nezinsimu ezishisayo ezivela kumafasitela amakhulu.
Igumbi eliphezulu lomndeni elihle kakhulu
Amakamelo Amakhasimende Aphezulu Aphezulu e-Palace of the Lost City eSun City Resort anezindlu ezihlukene zokungena, futhi alala nomndeni oneminyaka engu-4, ebhedeni lobukhulu benkosi kanye nombhede wokulala endaweni yokuphumula.
Indlu yokugezela en-suite ine-shower ehlukene, ama-vanity angama-twin aqoshiwe, futhi iza nezinto zokunethezeka, idesksi kanye netiye nekhofi. Izici ezengeziwe zifaka umoya wokuzithiba ozilawulayo, i-TV-flat screen eneziteshi zesathelayithi, ibha yamabhasi egcwele ngokugcwele, nensizakalo yegumbi lamahora angu-24.
Okuhlangene nokuhlala kwakho
Isidlo sasekuseni esigcwele
Ithuba lokuya esigodini samagagasi
Ukubiza umsizi nomayinini